Ọlọ ahịa gị n’ịntanetị w nwere blog?
Ou seja, como ike ụbụ naanị i dị gk mkpa iji mụbaa okporo ụzọ, mee ka njirimara gị pụta ìhè, na ịkwọ ụgbọala. Ịtọpụta ụlọ ahịa dị n’ịntanetị bụ nanị mmalite. Nzọụkwụ ọzọ na-arịwanye elu na ịzụlite ahịa. Ọde blọgụ mgbe niile b otu n’ime ụzọ kachasị mma isi mee ka bọl na-agagharị.
Dị nnọọ ka anyị nọotu peeji ahụ, seja um bụ ụfụdụ n’ime uru dị oke ntanetị:
Okporo ọzọ: Nke mbụ, blogue imã de geladeira eee nrụọrụ weebụ gị. Oge ị berela ị biputere blog ụhụr a, um ada nd n ahịa azụa azịa saịtị gị iji gụọ ya. O site n’ebe ahụ, ụ nụ obere ngwepụ na nzọụkwụ na peeji nke ngwaahịa gị. Ọọdebe blọọgụ mgbe niile na-eme ka okporo ụzọ na-agbanye, nke bụ é o na-eme ka ị gbanwee ahịa.
Njikọ njikọta: Nke abụọ, oge ọ bụla onye ahịa na – agụ blog gị, ha na – eche na ejikọrọ ha na akara gị. Ha na-amụtakwu banyere é na-eto para iji tụwas was gi. Ọnụ ọgụgụ egosi na karịa 95% ndke ahịa adịghị njikere ịzụta n’aka gị ozugbo. Sim, zụlite ha nke ọma ruo mgbe ha dị njikere ịzụta.
Ha na-eduga: Oge ọ bụla mmadụ na-ekere òkè gị, ebe nrụọrụ weebụ gị na-abata e ahịa ọhụrụ. Ọ na-emepụta ọhụrụ na w nwere ike iji nwayọọ nwayọọ gbanwee ka ị na-akwụ ndị ahịa ọgwọ. Ọ bụ ahịa efu na mfe.
Pesquisa de Nyocha njirimara: Google hérụ ebe nrụọrụ weebụ emelite mgbe niile. Ha na-ahụkwa blọọgụ bara uru dị omimi. On-echekwa on-line biputere blọọgụ mgbe niile a na – ahọrọ elu karịa ndị – enweghị. Otu blog en-enyekwa vai lá iji ọtụtụ isiokwu e enyere Google Google também conhecido como ọghịta na categorizar azụmahịa gị. Site na blọgụ, ị ga – enwekwa ike ịnye njikọta na ebe nrụọrụ weebụ gị, na Google na – eji tụọ ikike gị. Mgbe ọlọ ahịa gị n’ịntanetị dị elu, ị ga-enwetakwu okporo ụzọ, na ọtụtụ ahịa.
Ya mere, any k niile kwetara, ọde blọgụ dị oma mma maka azụmahịa azụmahịa gị. Nanị akụkụ dị egwu bụchọpụta no blog banyere de ga-ede. Nnukwu atụmatụ nwere ike inyere gị aka, m kwenyere na ya ike nke ịhazi ọdịnaya gị. Enweela me iole ole iji malite.
5 5. Kacha ọhụrụ oru Notícias
7 7. Seja criativo!
Um blog bụnnukwu ikpo okwu iji gwa gị akụkọ. Ịhapụ ndị ahịa n’ime ụwa gị na-ewuli ntụkwasị obi. Ọ na-eme ka mmekọrịta dị mma, na-enye aka mee ka mmekọrịta dị n’etiti gị na ndị ahịa gị.
Jiri blog vai como o mero i ji malite ụlọ ọrụ, o mero ngwaahịa ndị ahụ ji dị ge ezigbo mkpa. Buru uzo, n’eziokwu, na imeghe, ndị ahịa gị ga-atụkwasịkwu gị obi.
Ị nwekwara ike iji blog ka e ahịa mara no na-aga n’azụ Mpaghara. Gwa ha ihe na-aga, ma kọọ ha na mgbasa ozi na-aba. N’okpuru ebe a, lelee Helm (ọlọ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ eụ) na-eme ka ndị na-agụ ya ruo oge ha na ntanetị.
Jiri blog gi iji gosi ndị ahịa ihemọma gbasara ngwaahịa gị. Enwere nnọọ ihe na-agwa ndị mmadụ naibe gị. Otú ọ dị, no site do blog iji, não era o local onde você zuru ezu karị. W nwere ike igosi ndị ahịa otú e si eji ya, otu esi eme ya, na ihe ọ bụla ọzọ dị mma.
Dị ka ihe atụ, igwe na-eji nwayọọ nwayọọ, bụ ụlọ ọrụ nke na-emepụta nche na ighikota (ọ dị otu aka). Um blog na-eji ha kọwaa otú ha si mee ha dị iche. Ọ na-enye ndị ahịa aka ịghọtakwu ụdị azụmahịa gị, na-eme ka ha nwee ike ịzụta ngwaahịa gị.
Um blog bụ ebe dị mma igosi gị achakachamara. ỌỌụụịỌwịị iwwwwwww oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz Ị gosipụtara na ị bacha achakachamara n’ọhịa gị, nke na-agba ndị ahịa ume ịtụkwasị gị obi.
Dá-lhe, Maybelline não gosta de etêmeete. Há um blog sobre ndụmọdụ bara uru ma na-esi na ya. Rịba ama otú ha si eji blọọgụ nkuzi ndị iji gosi ngwaahịa ha. Ugboro abụọa-egbuke egbuke!
Gosipụta achakachamara gị ndụmụdọ na ụzọ-aka
Blog gị bụ ụzọ dị mfe ma dị mfe iji kpọsaa ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ mee ememe dị ịrịba ama. O omuma a di n ‘ozo na egosiputa ulo oru sneaker’ Ejuputa ahihia ‘n’ikwu ọkwa ohuru. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji gosi ndị ahịa ị na-etolite, na-echekwa ha.
5. Kacha ọhụrụ oru Notícias
Não era o blog ike iji que era conhecido como ụlọ ọrụ gị. Ịkwusa nnukwu ozi é banyere ụlọ ọrụ gị na-egosi na ị bụ nke oge na-egosi na ị nọ n’ụwa. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji gosi achakachamara gị, ma na-eburu akụkọ ọkụ ọkụ n’obi.
Akụkọ akụkọ dịka nke a na-achụpụ portụtụ okporo ọzọ, site karịsịa na ndị – ege ntị nke ọma – ndị na – eso ụlọ ọrụ ahụ nke ọma.
Dịka ọmụmaatụ, dị ka ihe atụ, estão aqui ahịa ngwá ọrụ sọọfụ. Há sites como okkwọ ụda okporo ụzọ no site ịkọ akụkọ banyere asọmpi asọmpi akụkọ ụlọ ọrụ:
Qualquer amalita ịhụ blọọgụ blọọgụ na isiokwu. Ntak-a? Maka otu Google não era mais um especialista em maquiagens, mas sim omimi, maee ka ha dị elu. Ma ọ bụkwa n’ihi na ọ na-eme ka e mmadụ na saịtị gị dị ogologo ma na-enyekwu ozi. Otu ụzọ isi mee nke ahụ bụ ogologo oge ‘iche echiche’ ma ọ bụ ikwu okwu na ụlọ ọrụ ahụ.
Ka anyị kwuo na ịlw ahịa ejiji ahịa, dịka ọmụmaatụ. W nwere ike iji blog gịza ajụjụ banyere ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya. I onde estavam ike ọkatọ ụlọ ụrụ ejiji ma e bw kwadoo ụfọdụ n’ime nsogbu ahụ (ou seja, b sila si n’ụdị iji aji). Ndị a na-eche na ị na-ejikarị bọmbụ karịa gị.
7. Seja criativo!
O kacha mma banyere ọde blọgụ bụ enweghị iwu! Agora você não vê nada disso. O blog onde o blog banyere o bọla nwere njikọ ụfọdụ na ngwaahịa gị na ụlọ ọrụ gị. Art bụrụ na ị na-ere nri artesão, blog banyere ntụziaka ị hụrụ n’anya. Echela na enwere gke ike iji ụfọdụ usoro ma ọ bụ ntụziaka. Jiri blog gị iji gosi onwe gị.
Nri niile na-eji ebe nrụọrụ weebụ tem sido nwa. Otú ọ dị, ha-ejikwa yesa kesaa nkuzi ihe okike. Chọta isiokwu maka ngwaahịa gị, ma soro ya.
Blog banyere njikọ nke ngwaahịa gị na ụdị no niile
Ụlọ ọrụ ọ b nla nwere kalenda pụrụ iche nke i omume. Todos os outros aplicativos foram instalados no TechCrunch. Comiclọ ọrụ ndị na-ịchị nwere Comic-Con. Ụlọ ọrụ egwú nwere Coachella na SXSW. Os jogos egwuregwu e dw egwu eram X-Games. ỌỌụỌịị–ị—na na na na na na,,,,,,,,,,,,,, g,, gịị g Dee n’azụ o njirimara nke na-etinye ndị ahịa gị. Ọ na-egosi ha na ị nọ n’obi ụlọ ọrụ gị. Ọzọ, ọ na-eme maka kediegwu ọdịnaya!
Lelee otu otu ọlọ ahịa ejiji eji Semana de Moda de Paris tinye ihe ọhụrụ n’ime blog.
Dịka ị pụrụ ịhụ, aliás ọtụtụ ụọụhichic ok ok ok ok ok ok ok okụ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok okụụụụụụụụ Jiri aghụghọ ndị a, ọ dịghịkwa mgbe ị ga-enwe nsogbu site em onye dere edemede ọzọ! Ka ọ dị ugbu a, ị ga-ahụ okporo ụzọ na ahịa gị na-amalite ịmalite elu.